Zimbabwe -- The Conversation, Johannesburg - allAfrica.com
This is no way to end an election that promised to bring a bright new post-coup and post Robert Mugabe dawn to a blighted Zimbabwe - 50.8% for ZANU-PF's Emmerson Mnangagwa to 44.3%… Read more »
It is said that two things are inevitable in life: death and taxes. To these a third might be added - election victories for former southern African liberation parties. This is… Read more »
Zimbabwe: Outrage Over Cecil the Lion Slaying Three Years Ago Left Little in Its Wake
It's just over three years since a lion was shot in Zimbabwe by Walter Palmer, a dentist from Minnesota in the US, in a drama that became known as "Cecilgate". The lion's death… Read more »
Zimbabwe's general elections on July 30 were being labelled as "historic". For the first time since independence in 1980, the ballot paper featured the faces of new presidential… Read more »
Zimbabwe: Poll Explained - Ballot Papers Galore, and Loads of New Politicians
When Zimbabeans go to the polls they will be voting in what's been dubbed "harmonised" elections. Read more »
Fake news is on the upsurge as Zimbabwe gears up for its watershed elections on 30 July. Mobile internet and social media have become vehicles for spreading a mix of fake news,… Read more »
Zimbabwe's governing ZANU-PF is earnestly courting international legitimacy as the country approaches its first post-independence elections without Robert Mugabe. Read more »
Zimbabwe: A Shock to the System - How New Teachers in Zimbabwe Learn to Do Their Jobs
There's a big difference between what prospective teachers learn at university and what they find when they enter the world of work. Some scholars have called this a "reality… Read more »
At the end of 2017, the world watched with keen interest as President Robert Mugabe was deposed after 37 years of ruinous rule, and replaced by Emmerson Mnangagwa, who promised "a… Read more »
Zimbabwe: What's Stopping Young People From Participating in Elections?
Zimbabwe will hold fresh elections at the end of July this year, a sign that, following decades of rule under autocratic leader Robert Mugabe, the southern African nation is on the… Read more »
Zimbabwe: Why Civil Rights and Health Issues Go Hand in Hand
Zimbabwe's recently deposed president Robert Mugabe made no secret of his loathing for gay men and lesbians. He once famously described them as "worse than pigs and dogs". In 2015,… Read more »
Zimbabwe urgently needs a new system of land administration to harness development in the agricultural sector. The country's land use and ownership have been significantly… Read more »
Zimbabwe's new President Emmerson Mnangagwa has been cautiously welcomed with the hope that he will place Zimbabwe on a more democratic trajectory. He has spoken of a new democracy… Read more »
The fall of Robert Mugabe has dominated global coverage of Africa over the past few weeks. In Western coverage of the first week after the coup in Zimbabwe there was speculation… Read more »
Who would have thought that this year would end with Robert Mugabe having lost the presidency of both the governing Zanu-PF and Zimbabwe? None could have foreseen such a… Read more »
Emmerson "Crocodile" Mnangagwa, Zimbabwe's crafty new interim President, is known as a ruthless, deeply unprincipled and a political infighter. He has lost several recent… Read more »
In his speech after being sworn in as Zimbabwe's new president on November 24, Emmerson Mnangagwa, stressed the role of the country's land reform farmers in boosting the country's… Read more »